स्वास्थ्य पेजछाला चिलाउने, पोल्ने र सुन्निने समस्यामा के गर्ने ? - स्वास्थ्य पेज छाला चिलाउने, पोल्ने र सुन्निने समस्यामा के गर्ने ? - स्वास्थ्य पेज
छाला चिलाउने, पोल्ने र सुन्निने समस्यामा के गर्ने ?
डा अनुपमा कार्की/ वरिष्ठ चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञ
छालामा देखिने विभिन्न समस्याले शरीरको अवस्थालाई समेत इंगित गर्छ । खासमा छाला भनेको शरीरको ऐना हो । शरीर कति स्वस्थ र तन्दुरुस्त छ भन्ने कुरा उसको छालाको अवस्थाले देखाउँछ ।
हाम्रो खानपान, जीवनशैली आदिको प्रत्यक्ष प्रभाव छालामा देखिन्छ । छाला स्वस्थ हुनु वा नहुनुमा यी कुरा जिम्मेवार छन् । त्यति मात्र होइन, हाम्रो मानसिक स्थितिले पनि छालालाई प्रभाव पार्छ । चिन्तामुक्त वा सकारात्मक सोच–चिन्तनले छालालाई स्वस्थ बनाउन भूमिका खेल्छ ।
हावापानी वा भनौं मौसमको असर पनि छालामा देखिन्छ । जस्तो, सुख्खायाममा एक किसिमको छालाको समस्या देखिन्छ भने वर्षायाममा अर्कै किसिमको । अहिले वर्षायाम छ । यसबेला पनि छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिन्छ ।
वर्षायाममा छालाको रोग
यो मौसम छालामा विभिन्न किसिमका समस्या देखिन्छ । हातगोडामा रिङवम आउने, एलर्जी ९एक्जिमा० अर्थात् छाला रातो हुने, सुन्निने र फुल्ने हुन्छ । आँखाले देख्न नसक्ने किटाणुको संक्रमणले छाला बेस्सरी चिलाउने, पोल्ने, फोका निस्किने, दाद लगायतका विविध समावेशले सताउने गर्छ ।
वर्षायामको मौसम मिश्रित खालको हुन्छ । कहिले चिसो त कहिले पोल्ने गर्मी । पानी परेको समयमा तैलिय छाला भएका मानिसको छाला धेरै नै तैलिय हुने त्यस्तै सुख्खा छाला पनि बढी सुख्खा हुन्छ । प्र्रतिकूल मौसम भइदिंदा छालालाई छिटो प्रभावित पार्छ । फङ्गस, ब्याक्टेरियाले छालामा विभिन्न समस्या उत्पन्न गराइदिन्छ ।
हरेक मानिसलाई छाला एउटै समस्या हुँदैन । कोही व्यक्तिलाई वर्षामा भिज्ने बित्तिकै एलर्जी हुने हुन्छ । कोहीलाई घाममा निस्कँदा । छालामा आउने समस्याबाट बच्न पानीदेखि टाढा रहने र घाममा निस्कँदा अनिवार्य सनब्लक क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ । एकदमै सुख्खा छाला हुनेले त अनिवार्य मोइस्चरराइजर लगाउन छुटाउनु हुँदैन ।
नेपालीमा छाला रोगको समस्या
छालाको समस्या उमेर समूह अनुसार फरक हुने गर्छ । किशोरकिशोरीमा डण्डीफोर देखिनु, वयस्क व्यक्तिमा चायापोतो, दुबी जस्ता समस्या देखिन्छन् । पछिल्ला वर्षमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन हामीले स्यानिटाइजर दल्ने, मास्क लगाउने कार्य अनिवार्य गर्छौं । यसले पनि छालामा एलर्जी र डण्डीफोरको समस्या बढाएको छ ।
तनावले छालामा समस्या ल्याउँछ
छाला रोगको प्रमुख कारण तनाव नै हो । व्यस्त जीवनशैली, भागदौड र तीव्र प्रतिस्पर्धाको अहिलेको समयले तनाव सिर्जना गर्छ । मानिस तनाव हुँदा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्दैन । यी नै मुख्य कारण हुन् ।
रोग लाग्ने एउटा कारण हामीले खाने खाना पनि हो । हामीले कस्तो खाना खाएका छौं । हाम्रो शरीर र खाना एकअर्कासँग नमिल्न पनि सक्छ ।
खानपान पनि कारक
कतिपय खानेकुराले पनि छालाको एलर्जी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ रु खास कस्तो खानपान छालामैत्री हुँदैन ?
सबैको छालाको भित्री बनोट फरक हुन्छ । त्यसैगरी शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि फरक हुन्छ । हामीले खाएको खाना र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीसँग जुध्न जान्छ अनि छालाको एलर्जी हुन्छ । एलर्जी हुने यही खानपान भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ ।
यस्तो समस्या व्यक्तिअनुसार भिन्न हुन्छ । कसैलाई बदामले पनि एलर्जी गराउँछ भने कसैलाई समुद्री खाना, चामल, राँगाको मासु लगायतले हुन्छ ।
छालाको समस्यामा वनस्पति पनि कारक
हावाहुरी चल्ने समस्यमा छालामा धेरै समस्या आउने गर्छ । हावाहुरी चल्दा वनस्पतिबाट काउसो उड्छ । यसको सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई छाला सुन्निने, रातो दाग बस्ने, एलर्जी हुने जस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
छालाको समस्याबाट बच्न के गर्ने ?
तैलिय, मिश्रित र सुख्खा गरी छालाका तीन प्रकार हुन्छन् । जसमा सबैभन्न्दा बढी छालाको समस्या सुख्खा छाला हुनेहरुलाई देखिन्छ ।
छालाको समस्याबाट बच्न तनाव व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । यसका लागि ताजगी रहन कोशिश गर्ने, प्रशस्त पानी पिउने, सन्तुलित भोजन खाने, फलफूलमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै विज्ञापनमा देखेको भरमा कुनै पनि क्रिम लगाउनुहुँदैन ।
क्रिम छनोट गर्दा आफ्नो छालाको प्रकृतिअनुसार गर्नपर्छ । अनिवार्य सनब्लक क्रिम लगाएर मात्रै घाममा निस्कनुपर्छ । छालामा केही समस्या देखिने बित्तिकै छालारोग विशेषज्ञको परामर्श लिनुपर्छ ।